तपाईको प्रोस्कोर के हो? | Martech Zone
त्यहाँ अहिले धेरै धेरै आन्दोलन भइरहेको छ रन उद्योग। मलाई लाग्छ Klout भर्खर आलोचनाको एक बिट प्राप्त गरेको छ ... यो कठिन छ कुनै पनि क्षेत्र मा ब्लक मा पहिलो मान्छे हुनु। म कृतज्ञ छु कि कसैले उद्योगमा पहिलो अधिकार स्कोर विकास गर्न कडा कार्य उठायो, र आशा छ कि तिनीहरू आफ्नो एल्गोरिदम अनुकूलन गर्न सक्षम छन् र तिनीहरूलाई विकास गर्न जारी राख्छ।
एक प्रतिस्पर्धी म देख्छु राम्रोसँग माथि बढ्दै छ प्रोस्कोर। तिनीहरूको एल्गोरिथ्म भर्खरको व्यवहारमा निर्माण गरिएको छैन (जस्तो Klout देखिन्छ), यो नेटवर्क, अनुभव र जडानहरूमा निर्मित छ। यहाँ एक भिडियो छ जो PROskore लाई व्याख्या गर्दछ:
प्रोस्कोरले अर्को राम्रो सुविधा थप्छ ... उत्पाद र सेवाहरूको आपूर्तिकर्तासँग प्रदायकहरू मिलान गर्ने क्षमता। यदि तपाईं एसईओ विशेषज्ञको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्रणालीले राम्रो पत्ता लगाउन सक्ने र भौगोलिक रूपमा नजिक भएको एक फेला पार्न सक्दछ। यो ठूलो छ ... तपाईंलाई अनुमति दिँदै नेतृत्व खोज्नुहोस् र नजिकै अवसरहरूको पीछा गर्नुहोस्, वा तपाइँ वरिपरिको प्रतिभा पत्ता लगाउन।
त्यहाँ "प्रोफेशल स्कोर" मा यस्तै त्रुटि छ, यद्यपि, र त्यो हो कि यो एक व्यक्तिको को कनेक्टिविटी मा धेरै तौल छ। गुगल, एप्पल र माइक्रोसफ्ट जस्तै कम्पनीहरूमा हजारौं पीएचडीहरू काम गरिरहेका छन् जुन प्रतिभाशाली छ, हरेक दिन संसार परिवर्तन गर्दैछ, तर सामाजिक रूपमा आफूलाई बाहिर नलगाउनुहोस्। मलाई लाग्छ कि यो स्कोर, अन्यसँग पनि, गहिरो खन्नको सट्टा सतहलाई खण्डन गर्न जारी राख्दछ।
यी scorking एल्गोरिदम extroverts इनाम र अन्तर्मुखीहरुलाई दण्ड दिनुहोस्। तथ्य यो हो, हामी सबै बहिर्गन हुन सक्दैनौं ... र कम्पनीहरूले दुबै आवश्यक छ यदि तिनीहरू सफल हुन चाहन्छन्। त्यसो भए, छोटो अवधिको लागि, मलाई लाग्छ यी स्कोरिंग अनुप्रयोगहरू स्पॉटलाइट खोज्न हामीहरूका लागि उत्कृष्ट छन्। म व्यवसायहरूलाई उनीहरूको मार्केटि bas आधारमा वा यस बिन्दुमा कुनै पनि अभियानमा भर्ती अभियानहरू लाई सावधान गराउन सक्छ यदि तपाईंको ग्राहक वा कर्मचारीहरू सामाजिक तितलगाँट छैनन् भने। स्कोरहरू प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ उनीहरूले अर्थ राख्छन्!
म वास्तवमै प्रोस्कोरलाई मनपराउँछु, तर मेरो अन्तिम आलोचना मसँग एक हो जुन धेरै स्कोरिंग एल्गोरिदमहरूसँग छ। यो महान छ कि तपाईं हाल म कहाँ हुनुहुन्छ जानकारी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ... तर जानकारी बेकार छ जब सम्म तपाईंले यसको के गर्ने भनेर मलाई बताउँनुहुन्न। यदि प्रोस्कोरले मानिसहरूलाई अधिक जडानहरू, अधिक अनुभव प्राप्त गर्न, वा कुनै अन्य महान सल्लाहहरूको टुक्राहरू उपलब्ध गराउन सल्लाह दियो भने, प्रणाली अधिक शक्तिशाली हुनेछ। Klout केहि प्रतिक्रिया प्रदान गर्न प्रयोग गर्‍यो… तर मँ अब यो तिनीहरूको साइटमा देख्दिन।
व्यक्तिले कसरी स्कोर गर्छ भनेर देखाउन यो पर्याप्त छैन, कसरी यसलाई सुधार गर्ने भनेर सिकाउनुहोस्!
टैग: अख्तियारkloutKlout स्कोरप्रोस्कोरस्कोररनस्कोरिंग एल्गोरिथ्म
स्टीव रोजगारहरू: फोकस, दर्शन, डिजाइन
WordPress बहु-डोमेन लग इन छोराहरू
डिसेम्बर १, २०१ 28 2011:२:2 अपराह्न
राम्रो पोस्ट डग्लस। तपाइँ इन्ट्रोभर्टहरू बनाउने पुरस्कृत गर्ने इन्ट्रोभर्टको बारेमा मर्नुभयो। वास्तवमा यो एउटा कारण यो हो किन हामी (प्रोस्कोरे) व्यक्तिलाई सामाजिक प्रभाव भन्दा बढीमा आधारित स्कोर गर्दछौं। हामी शैक्षिक पृष्ठभूमि र कार्य इतिहासलाई ध्यानमा राख्छौं। मलाई विश्वास छ हामी यो गर्नका लागि एक मात्र मंच हो…
हामी भर्खर सुरु गर्दैछौं ... कभरेजको लागि धन्यबाद!
बिल - धेरै रोकिरहेको र महान कार्य जारी राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अगाडि हेर्दै छु कि अर्को के हो!